67Ha. Halatra moto Roalahy nifanehitra tamin’ny polisy
Mpitandro filaminana Malagasy Tena mbola tsy ampy isa
Resy tosiky ny olona tezitra noho ny delesstazy teo an-toerana ny mpitandro filaminana noho ny tsy fahampian’ny isan’ireto farany, raha ny tranga teo Antalaha no heverina, ka nahamay ny biraon’ny Jirama.
Mahana ! Ny iray tratra, ny namany hafa kosa nanjavona rehefa nifampitady tamin’ireo mpitandro ny filaminana. Kaodikaody avy hatrany izy ireo ka tonga dia nanatanteraka ny asany ny mpanao fisafoana.
Raha iverenana ny tantara, nanao tari-dositra ireo roalahy nanosika môtô raha vao nahita ny fiaran’ireo polisin’ny CSP7 saika nifanehatra tamin’izy ireo. Teo am-pisafoana ny Faritra 67Ha Avaratra Atsinanana izy ireo ny zoma 25 janoary tamin’ny 7 ora maraina teo no nahatsikaritra ireo olon-dratsy nirifatra nitsoaka. Araka ny fampitam-baovao teo anivon’ny polisim-pirenena eo Anosy, narian’izy ireo avy hatrany teo amin’ny lalana saika nifanenana ilay moto. Nanenjika avy hatrany ny polisin’ny CSP7. Ny iray no tra-tehaka, taorian’ny fifanjevoana fa ny iray hafa tafaporitsaka tany anelakela-trano.
Niaiky ny heloka vitany ilay voasambotra, nandritra ny famotoran’ny mpitandro ny filaminana. Voalazan’ity farany fa tany Alasora no nakan’izy roalahy an-tsokosoko sy nanosehany ilay moto. Efa notanana am-ponja vonjimaika izy. Mbola mifanome tanana manohy ny fikarohana ilay namany tafatsoaka kosa ny mpitandro ny filamanana eto Antananarivo Renivohitra sy ny avy amin’ny Faritra manodidina. Marihina fa vao 20 taona ilay tra-tehaka. Raha ny trangam-piarahamonina tato ho ato no zohina, saika zatovo erotrerony avokoa, tsy lahy tsy vavy, na ambanivohitra na an-drenivohitra ireo mpanao asa ratsy tratra.